HALKAAN KA AKHRISO WAA WARARKA WARGEYSKA MOGADISHU TIMES DAILY NEWS PAPER EE MAANTA OO AH SABT 19-Ka OKTOOBAR 2019-KA
Saturday October 19, 2019 - 09:22:43 in Wararka by Mogadishu Times
ADAXWEYNE FARMAAJO OO XARIGGA KA JARAY TAALLOOYIN TAARIIKHI AH OO DIB U DHIS LAGU SAMEEYAY FB_IMG_1571420704220-1024x683 Madaxweynaha JFS Md. Maxamed C/hi Farmaajo
Mayaa xarigga ka jaray taallooyinka Sayid Maxamed Cabdu lle Xasan, SYL, Dhagax tuur, Xaawo Taako iyo Axmed Gurey oo dha mmaantood dib u dhis iyo dayactir lagu same eyey.
Madaxweynaha ayaa tilmaamay muhiimad da astaamahan iyo casharrada ma guurtada ah ee shacabka Soomaaliyeed ay waqti ka sta kala bixi karaan taariikhdeenna ay ku suntan tahay midnimada iyo geesinimada.
Sidoo kale, Madaxweyne Farmaajo ayaa mid mid uga dul-istaagay taariikhda bidhaa meysa ee halyeeyadan, waxa uuna Alle uga baryey dhammaantood in uu ka abaal mariyo halgankii xornimadoonka ahaa iyo in ay naftooda u hureen si dadkooda iyo dal kooduba ay xor u ahaadaan.
"Dalkeennu waxa uu leeyahay halyeeyo badan oo ay tusaale u yihiin halgameyaa shan aan Shalaymaamuuseyno, waxaan ra jaynayaa in aan wado xusno si la mid ah taa looyinka Shalayhalyeey kasta oo dalkeen na wanaag ku daray. Dhammaan halyeeya dii naftooda u huray xornimada dadka Soo maaliyeed waxa ay naga mudan yihiin maa muus iyo duco.”
Madaxweynaha Jamhuuriyadda ayaa ugu baaqay dadka Soomaaliyeed inay sii a mba-qaadaan halgankii halyeeyadooda, ka na miro dheliyaan hiigsigii ay naftooda u hor een oo ku saleysan midnimo, wax-wadaqa bsi iyo in ay noqdaan dad iyo dal miisaanko oda ku leh dunida.
"Dhammaan Halyeeyadan waxa ay ka wa da shaqeynaayeen xornimada dalka, gume ysiga, quursi iyo qabjabka in uu dalkeennu ka xoroobo, sidoo kale dadkeennu ay qaby aalad ka xoroobaan, taas ayaana sabab u noqotay in aan yeelanno Qaran haybad, sharaf iyo maamuus kulahaa caalamka. ”
Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaa jo ayaa adkeeyey muhiimadda uu leeyahay Barnaamijka Isxilqaan oo horseeday in dib loo dhiso, laguna dayac tiro goobahan taari ikhiga ah ee ku burburay dagaalladii sokee ye iyadoo kuwo kale oo haatan gabo gabo maraya, waxa uuna uga mahad-celiyey muw aadin kasta oo xooggiisa iyo xoolihiisaba geliyey dib u dhiska dalka.
Madaxweynaha Mareykanka, Donald Trump ayaa bogaadiyay dhigiisa dalka Turki ga, Recep Tayyip Erdogan, kadib markii xuk uumadda Ankara ay oggolaatay inay si KMG ah u hakiso duulaanka ay ku baacsaneyso Kurdiyiinta ee waqooyiga dalka Suuriya. Ma daxweyne Trump oo ka hadlayay isu soo bax ka dhacay gobolka Texas ayaa waxaa uu sheegay in wafdi uu hogaaminayo Mad axweyne ku xigeenka, Mike Pence uu u dir ay dalka Turkiga, ayna guul ka soo hoyeen kulankii ay la yeesheen Madaxweynaha Turki ga.
Trump ayaa Madaxwey naha Turkiga, Erdogan ku tilmaamay nin fariid ah oo aad u fiican.
"Iydoo uusan hal dhibic oo dhiig ah ka da adanin askarta Mareykanka, waxaan dhama anteen ku heshiinay xabad joojin laga hirgel iyo xadka Suuriya, Turkiga waxaanu ka qaa deynaa cunaqabateynta, Madaxweyne Erdo gan na waa fariid oo aad u wanaagsan", ay uu yiri Trump oo ka hadlayay Texas.
Wuxuu intaa raaciyay in labada dhinac uu Mareykanka saaxiib la yahay, mararka qa ar ay wanaagsan tahay in labada dhinac ay dagaalamaan oo aad isku daawato, faraha na ka qaado, marka dambena aad kala cel iso.
Siyaasiyiinta xisbiga Dimuqraadiga ayaa Madaxweyne Trump ku dhaliilay cunaqabat eynta uu ka qaaday Turkiga, saddex maalin uun kadib markii uu cunaqabateyn ku soo rogay Turkiga, waxaana ay intaa raaciyeen in dhaawac uu soo gaaray sumcadda siyaa sadda arrimaha dibadda ee Mareykanka.
Sarkaal sare oo katirsan taliska Kurdiyiinta oo lagu magacaabo Mazloum Kobani aya waxaa uu sheegay in ay aqbali doonaan ha kinta hawlgalka Turkiga uu ka sameynayo Magaalooyinka Ras al-Ayn iyo Tal Abyad.
Dalalka Mareykanka iyo Turkiga ayaa ma alin ka hor isku afgartay in si KMG loo joo jiyo duulaanka Turkiga uu ka wado waqooy iga Suuriya ee uu ku baacsanayo Kurdiyiinta Suuriya.
Wargeyska The Foreign policy oo wax ka qora siyaasadaha caalamka ayaa kusoo war ramay in heshiiskan uu u muuqdo mid guul weyn u ah xukuumadda Ankara oo waday ol ole ay Kurdiyiinta kaga xoreneyso xadka ay la wadaagto Suuriya.
Kadib Sagaal cisho oo uu Turkiga duul aan ka waday waqooyiga Suuriya, haatan waxaa uu aqbalay in uu hakiyo hawlgalka mudo dhan 120 saacadood.
Heshiiska ayaa sidoo kale lagu xusay in Mareykanka uu wakhtigaas uu ku daad gur eyn doonaa Kurdiyiinta aaga dhan 30 kil omitir oo uu Turkiga doonayo in uu ka same eyo aag nabdoon.Madaxweyne ku xigeenka Mareykanka, Mike Pence oo shir jaraa'id ku qabtay Magaalada Ankara ayaa sheegay in marka la daad gureeyo Kurdiyiinta oo ay do wladda Turkiga u aragto inay yihiin argagagi xiso, ay xukuumadda Ankara si joogta ah u dhaqan gelin doonta xabad joojinta.
"Dowladda Mareykanka waxay marwal ba abaal u heysaa saaxiibadeen SDF, oo ka adkaaday kooxda ISIS, balse sidoo kale wax aan aqoonsanahay ahmiyadda iyo qiyamka ay leedahay aag nabdoon oo laga sameeyo dhulka Kurdiyiinta iyo xadka dalka Turkiga", sidaas waxaa yiri Madaxweyne ku xigeenka Mareykanka oo sheegay in uu soo diray Tru mp, si loo dhameeyo qalalaasaha taagan, loona gaaro xabad joojin degdeg ah.
Qaar kamid ah hay'adaha sharci dejinta ee Mareykanka ayaa aad ula yaabay go'aan ka Madaxweyne Trump uu ciidamada kaga saaray waqooyiga Suuriya, waxaana qaar badan oo kamid ah siyaasiyiinta xisbiga dim uqraadiga ay shegeen in uu dhaawac soo gaaray sumcadda siyaasadda arrimaha dib adda ee Mareykanka.
RW Khayre "Dowladda Soomaaliya wax aa ka Go’an buuxinta shruudaha ku xiran in dalka deynta laga cafiyo..”.
Washington:-Ra’iisul Wasaaraha XFS, Md.Xasan Cali Khayre ayaa magaalada Wa shington ee dalka Mareykanka uga qayb ga lay shirka miiska wareegsan ee Bangiga iyo hey’adda lacagta adduunka.
Ra’iisul Wasaara ha ayaa khudbad uu shirka ka jeed iyay waxa uu uga hadlay guulaha la ga gaaray qorshaha deyn cafinta dalka iyo si da ay dowladda Soomaaliya uga Go’an tah ay buuxinta shruudaha ku xiran in dalka deynta laga cafiyo.
Ka qayb galayaasha shirkaan, oo ay soo qabanqaabisay dowladda Ingiriiska, ayaa isla qiray in Soomaaliya ay gaartay guula mu hiim u ah mustaqbalka dalka iyo gaaridda ba rta go’aanka ee deyn cafinta dalka, waxa ay na ballan qaadeen in ay sii wadayaan taage erada, iyo garab istaagga shacabka iyo dow ladda Soomaaliyeed.
Taliyihii hoggaaminayay howlgalkii lagu qabtay Awdheegle oo Muqdisho lagu dilay
Ciidamo ka tirsan dowladda ayaa isku rasaaseeyey Agagaarka Hotel Naasahabl ood,waxaana ka dhashay Khasaare is ugu jira dhimasho iyo dhaawac.Maxaadeey Saleebaan Taliyihii Ururka Gorgor ee Ku maandooska Ciidan ka Xoogga dalka iyo Mid ka mid ah Ilaaladi isa ayaa la xaqiijiyay in ay ku geeriyoodeen israsaaseynta.
Maxaadeey ayaa Isbitaalka Digfeer ee Muqdisho ugu geeriyooday Dhaawac kasoo gaaray Israsaaseynta labada dhinac.
Maxaadey ayaa ahaa Sarkaal Firfircoon oo ka mid ah Ciidanka ka howlgalla Shabeel laha Hoose ee ay tababartay dowladda Tur kiga xigsho:-radiorisaala.com
Xildhibaanada Golaha Shacabka ee Baa rlamaanka Soomaaliya ayaa Maanta 19/ 10/2019 wax aa ay kulankoo dii caadiga ahaa ku yeelanayaan Xar unta Golaha Sha cabka ee M/Mu qdisho.Ajendaha kulanka ayaa ah Hadal Jee dinta Guddoomiyaha Golaha Sha cabka iyo Akhri nta 1aad ee Heshiiska Ilaa linta Hiddo Dhaqa meedka Aan muuqan iyo Heshiiska Khuseeye Ilaalinta Hidda Dhaqa meedka & Midka Dabiiciga.
Xildhibaananada Golaha Shacabka ayaa xalay lagu wargeliyay in Maanta oo Sabti ah uu jiro kulanka Baarlamaanka,isla markaana ay soo xaadiraan .
Kulankaan ayaa noqon doonaa kulankii 1-aad ee Kalfadhiga 6-aad Xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya oo fasax ku jiray bilihii lasoo dhaafay.
DOWLADDA SOMALIA OO WAR KASOO SAAR TAY GO’AANKA AY GAARTAY MAXKAMADDA ICJ
Kadib markii Maxkamadda Caddaalada Adduunka ee ICJ ay dib u dhigtay dha gey siga dacwada badda ee u dhaxeeysa do wladaha Soomaaliya iyo Kenya ayaa wax aa arrintaasi war ka soo saartay DFS.
K u-Simaha R/Wasaaraha ahna R/Wasaa re ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Gu uleed Khadar oo la hadlay Warbaahinta Qa ranka ayaa waxaa uu sheegay in dowladdu oggoshahay go’aanka ka soo baxay Maxk amadda ICJ oo noqon doona mid kama da mbeys ah.
Sidoo kale Mahdi Maxamed Guuleed Kha dar ayaa waxaa uu sheegay in dowladda Fe deraalka ay diyaar u aheyd in 4-da Bisha November ee sanadkan la dhageysato dhag eysiga dacwada badda ee dowladaha Soo maaliya iyo Kenya oo markii horey ICJ labad bilood ay ku dartay dhageysiga Kiiskaas.
Maxkamadda ICJ ayaa go’aamisey in dhi geysiga dacwada badda ee u dhaxeysa So maliya iyo Kenya laga dhigo June 8- 12 ee Sanadka 2020-ka,Maxkamadda ICJ ayaa go ’aankeeda ku cadeeysey inay fileyso in 2da waddan u yimaadaan dhigeysiga Maxkma da.Go’aankaana u yahay mid kama damb eys ah ee mar dambe dib loo dhigi doonin.
KACDOON KA DHASHAY WHATSAPP OO KA BILAAWDAY LUBNAAN
Dibad-baxayaasha dalka Lubnaan ayaa Shalayxannibay wad dooyinka, ayaga oo gubaya taayaro, xilli ay maalintii 2aad wadaan di bad-baxyo ka dhan ah dowlad da,sababo la xiri ira xasarad dhaqaale.Dibad-baxyada oo ah kuwii ugu xoogganaa dalka Lubanaan ee muddo san ado ah, ayaa kumanaan qof waxa ay isugu soo ur ureen dibadda xarunta dowladda ee ma ga alada caasimadda ah ee Beirut.
Waxay ku guuleysteen inay golaha wasiir ada ku qasbaan inay dib uga laabtaan qor she ay canshuur ugu soo rogi lahaayeen wic itaanka lagu sameeyo WhatsApp-ka.
Gaaska dadka ka ilmeysiiya ayaa sidoo kale la furay markii ay isku dhaceen dibad-baxa yaasha iyo booliska.
Qaar ka mid ah dibad-baxayaasha yimid xarunta dowladda ee magaalada Beirut ayaa ku hadaaqayey erayo ay ka mid ahaayeen "Shacabku waxay doonayaan in talisku dhaco.”
Wargeyska An-Nahar ee Lubnaan ayaa dibad-baxyada ugu yeeray "kacdoonkii can shuurta”, halka wargeyska al-Akhbar uu ugu yeeray "Kacdoonkii WhatsApp.”
Si uu sare ugu qaado dakhliga, ayaa wasi irka isgaarsiinta Mohamed Choucair waxa uu khamiistii ku dhowaaqay qorshe uu can shuur 20 cent ah uga qaadayo wicitaanada taleefon ee lagu sameeyo Internet-ka, sida app-ka facebook iyo WhatsApp.
Hase yeeshee markii dibad-baxyada ay fide en ayaa waxa uu isla khamiistii wacay war baahinta una sheegay in qorshahaas laga laabtay.
Lubnaan oo ay la dageen dagaalladii dhacay 1975-kii iyo 1990-kii ayaa waxaa saa ran mid ka mid ah daymaha ugu badan caa lamka marka loo eego kaalinta saamiya dhaqaalaha dalka.
Kororka dhaqaalaha dalka ayaa waxaa saameeyey xasillooni la’aanta gobolka. Sha qo la’aanta dadka da’doodu ka yar tahay 25 jirka, ayaa ah 37%.
GAADIIDKA BAJAAJTA OO MAALINTII SADE XAAD AAN SHAQAYNAYN LAASCAANOOD
Boqolaal ka mid ah gaa diidka Bajaajta ayaa ku cidhan saldhigyada M/La ascaano od xarunta G obolka So ol kadib markii ay ka horyimaadeen bixi nta cashuurta Dawlada Hoose.
Gaadiidkan oo ah gaadiidka keliya ee dad weynuhu adeegsadaan ayaa saamayn xoo gleh ku yeeshay isu socodka bulsh ada mag aalada ku dhaqan.
"Sadexdaa maalmood maan aadin su uqa waayo wa xaan hubaa inaanan socon ka rayn, dano b adan baa igaga xidhan hadana waxaa ii sa amixi waayey gaadiid la'aanta dhacda" sidaa waxa warbaahinta u sheegt ay Samsam Maxamuud oo daanta bariga meherad yar ku haysata.
Ku dhowaad toban sano oo baaxada ma gaaladu aad u fiday waxaa si xoogleh u soo badanayey gaadiidkan oo meesha ka saaray tagaasidii iyo basas waqtigaa ka hor magaa lada u adeegi jirey. "Ma jirto dhaqaale badan oo aan ka helo sababtoo ah Bajaajta oo ba datay, cashuur baa nalaga qaadaa hadana mid kale ayaa la yidhi keena mana awood no" sidaa waxaa yi ri wiil dhalinyaro ah oo saldhiga dhexe agtiisa taagnaa kana mid ah dadka gaadi idka laga cidhay.
Cashuuraha laga qaado gaadiidka dadw eynaha oo maaliyadu ta ay sanadkii qaado ka sokow dawlada hoose waxa ay qaadaa ta liisanka gaadiidka dadweynaha waana taas ta dhalisay murankan saamaynta ku yee shay bulshada, iyadoo kuwa xidhan masha ane boqolaal kale ay ku dhuumaalaysa nayaan magaalada.
Majir tanaasul laga rajeynayo qolyaha ca shuuraha doonaya iyadoo haatan sanadka qaybtiisii danbe lagu jiro.
Shacabka kala duwan ee ku nool maga alada Jigjiga ayaa Shalayisugu soo baxay waddooyinka laa miga ah ee magaalada, iya goo wata boodh adh ay dareen kooda ku cabi rayaan. Hadd aba Dibadbaxan ayay shacabku ku muujina yaan sida ay uga xun yihiin dadkii dhawaan ay Canfartu ku xas uuqday gudaha Gobolka Sitti.
Dibadbaxan ayaa ah kii u horeeyay ee degaanka ka dhaca tan iyo intii ay bilowdeen colaadda Soomaali iyo Canfar u dhaxaysa. Shacabka degaanka ayaa maalmahan gac an bidixeen ka dareemayay dhanka Warb aahinta dawladda oo habayaraatee aan ka hadlin dhibaatada soo gaarta Soomaalida iyagoo kaliya gudbinayay dhinaca Canfarta.
MUSEVENI”BOBI WINE WAA CADAWGA UGANDA”
Madaxweynaha Uganda Yoweri Musev eni ayaa ninka sida weyn u dhaliila siyaa saddiisa Bobi Wine ku tilmaamay Cadaw ga dalka ee ka hor imaadsan horumarka.
"Bobi Wine, wuxuu aad ay Mareykanka,wuxuuna yiri ha imaanina Ug anda si aad u maalgash ataan, marka wu xuu cadaw ku marka waxaad duulaan ku ta hay horum ark eena” ayuu yiri Museveni oo war eysi siin ayay BBC. Ninkan sida iskiis ah igu dhawa aqay inuu yahay "madaxweyne xaafadeed ka” ayaa laf dhuun gashay ku noqday mada xweyne Museveni tan iyo markii xildhibaan loo doortay Bobi Wine san nadkii 2017-kii.
Waxaana loo arkaa inuu yahay xildhi ba anka isku taagay madaxweyne Yuweri Mu seveni. Dhawaan wuxuu shaaca ka qaaday in uu la tartami doono madaxweyne Mus eve ni doorashada 2021-ka.
DENI OO SHEEGAY INAY BILAABAYAAN XALINTA KHILAAFKA DOWLADDA & JUBBALAND
Madaxweynaha Dowlad goboleedka Pun tland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa sheegay in Puntland ay diy aar u tahay ka qeb-qa adaash ada xali nta khilaafka xil liga an u dha xeeya dowl adda Federaalka So omaal iya iyo Maa mulka Jubbala nd. Waxaa uu sheegay Deni in Puntland ay mar walba horseed u tahay howlaha federaalka ee socda,isla markaana cid kasta oo diidan wixii ka dhacay Kismaayo ha ahaato DFS iyo kuwa kale ee ku sugan Kismaayo inay diyaar u yihiin inay isku soo dhaweeyaan.
"Puntland waxaa ay diyaar u tahay inay maamul goboleedyada oo dhan inay garab istaagto sida aad horay u ogeyde en,doorw eyn ayaana ka qaadaney naa,waxana raje ynayaa in khilaaf kasta oo taagan sigaar ah kan u dhaxeeya dowladda & jubbaland in la ga gudbi doono, laba qof ayaa hadda ii muu qdo balse an miisan ku laheyn Kismaayo ayuu yiri” Siciid Deni.
Hadalka Madaxweynaha Dowlad gobole edka Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa imaanayo xilli weli uu taagan yahay khila afka xoogan ee u dhaxeeya DF& Maamulka Jubbaland taas oo xoogeysatay, kadib dib u doorashadii Axmed Madoobe.
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre oo ku sugan M/Washington ee dalka Mareykanka ayaa waxaa uu kulan ga ar ah halkaasi kula qaatay Kaaliyaha Xogh ayaha Arrimaha Dibadda Mareykanka ee Afrika Tibor Nagy.
Kulanka ayaa wa xaa ay uga hadle en horumarka la ga sameeyay arr imaha deyn cafin ta dib u habeynta Amniga iyo qod obo kale,sida uu sheegay Kaaliyaha Xoghay aha Arrimaha Dibadda Mareykanka ee Afrika Tibor Nagy.
Sidoo kale waxaa ay labada dhinac ka wada hadleen muhiimada ay leedahay horu marinta Federaaleynta iyo diyaarinta doo rashooyinka sanadka soo socda.
R/Wasaare Kheyre ayaa inta uu ku su gan yahay Magaalada Washington ee dalka Mareykanka waxaa u sidoo kale kulamo kala duwan la qaadan doonaa mas’uuliyinta ka qeyb-galeysa shirka sannadlaha ah ee Bang iga adduunka iyo hey’adda lacagta adduun ka (IMF).
Xuno ka kala tirsan golaha wasiirada iyo baarlamaanka Puntland oo mudooyinkii u da nbeeyey ku sugnaa M/Buuhoodle ayaa u muuqda kuwo aan rajo weyn ka gaadhin dhismaha golaha degaanka.
Shirar gooni gooni ah, kuwo qabiilooyin wax tabanayaa leeyihiin iyo kuwo ay gacmo ka soo horjeeda hawsha la wado ayaa ka so conaya welina uma naasacada sidii ay ma amulka Puntland u gamidho dhalin lahaay een.
21 xubnood oo golaha dehaanka u me teli doonashacabka oo aan codina dooran ee la magcaabay ay saami qaybsi laga tu uray taasoo lafteedu noqotay mida xiisada ci rka ku shareertay iyadoo dhamaan beelaha halkaasi dega oo 30 ku dhow ay diideen marka laga reebo waxyar oo ah kuwa loo tirinayo inay xaabsadeen.
Degmada Buuhoodle waxaa horey uga jirey gole degaan oo ay dhiseen maamulkii Khaatumo ee Burburay kaas oo hawlo baa xadleh ka qabtay degaanka sumcad badana kasbaday kuwaas oo iyana leh anagaa ah golaha degaanka ee jira, inaan mid kale in aan la dhisi karina hadaladooda ayay ka muuqatey horaantii bishan.
M/Buuhoodle waa degmada keliya ee ee 4 calan oo kala duwan ka taagan yihiin, It obiya oo iyadu qaybta galbeed ka talisa siiba xaafada Zuweeto ama shaxda, sadexda kale maamulka Puntland ayaa ugu tugtug roon, Somaliland iyo Khaatumo oo raadkeedu hal ka keliya ee uu ka sii muuqdaaay Buuhoodle tahay.
Inkasta oo maamulka Puntland oo i soo diray buuhoodle xubnihii ugu badnaa ee go layaasha kaga jira degaanka ayay dhabarjab ku noqonaysaa, iyadoo aanay ka madhnayn xurgifta dhuleed ee ka dhexaysa puntland iyo Somaliland.
MAXKAMADDA CIIDAMADA OO XARUN KA SAMAYSANAYSA GAALKACYO
Taliyaha qaybta 21-aad Gen; C/Casiis C/hi Cabdi "Qooje” iyo Saakiisha Maxkama da Ciidanka Qalabka sida qeybta 27-aad ay aa kormeeray dhismaha xarunta Maxkama da ciidanka qalabka sida qaybta 21-aad oo laga hirgalinayo Magaalada Gaalkacyo oo xil ligaan maraya meel gaban gabo ah.
Kormeerkan waxaa qeyb ka ahaa ku Xi geenka Xeer-ilaalinta Maxkamadda Ciidanka Qalabka sida ee Soomaaliya G/le "Keyse” , iyo Saraakiil kale.
Saraakiisha ayaa u kuur gashey waxyaa baha ka dhiman xarunta Maxkamada oo hir gelinteedu horseedi doonto in la qaado dac wadaha loo heysto eedeysanayaal ku Jira Xabsiyada kala duwan ee Ciidanka.
Taliyaha qeybta 21-aad ayaa tallaabada dhismaha xaruntaan ku sheegey in ay ka mid tahay juhdiga uu taliskiisu tan iyo markii la soo Magacaabey ku bixiyay dhismaha xarumaha adeegga ee Ciidanka, isagoo intaa raaciyay in ka shaqeysiinta Maxkamad du ay tusaale buuxo u tahay Dowladnimada iyo kala sarreynta sharciga Dalka.
Koox hubeysan ayaa toogasho ku dish ay mas’uul ka tirsan maamulka Puntland, xili uu ku sugnaa Waqooyiga Magalada Gaalk acyo ee Puntland.
Mas’uulkan la dilay ayaa lagu magacaa bi jiray Xasan Cabdille Hiraabe oo katirsa naa Wasaaradda Maaliyada ee gobolka Mu dug.
Kooxihii dilka geystay ayaa la sheegay inay goobta ka baxsadeen, waxaana halka asi gaaray Ciidamo ka tirsan booliska ma amulka Puntland.
Xuseen Cabdille ayaa horey u soo noq day masuul katirsanaa golihii deegaanka ee M/Gaalkacyo iyo kuxigeenka Duqa M/Gaal kacyo waxaana hadda uu ahaa Taliyaha Ka stamyada Canshuuraha ee wasaaradda Maaliyada Puntland ee gobolka Mudug.
DAGAAL GEYSTAY DHIMASHO IYO DHAAWAC OO KA DHACAY HIIRAAN
Dagaalkaan oo geystay khasaaro kala duw an ayaa Kooxda la Magac baxday Mac awiisl eey iyo Xubno ka tirsan Ururka Al-Sha baab waxaa uu ku dhexmaray deegaan dul eedka ka ah degmada Maxaas ee Gobolka Hiiraan.
Dagaalka ayaa yimid kadib markii Xubno ka tirsan Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen dee gaan lagu Magacaabo Waab-weyn halk aas oo meel u dhow ay ku sugan yihiin koo xda Macaw iisleey,waxaana halkaasi ka dha cay dagaal mu ddo sacad ku dhow socday. Mas’uuliyiin ka tirs an Maamulka G/Hiiraan ayaa waxaa ay sheeg een in dagaalkaas ay ku geeriyoodeen 3 ruux halka qof kale uu ku dhaawacmay.
Gudoomiyaha D/Maxaas ee G/Hiiraan Cabdi Muumin Cilmi ayaa sheegay inay ga can siin doonaan kooxda Macawiisleey ee dagaalka kula jira Al-Shabaab. Wararkii ugu dambeeyey ee kaatan ka imaanaya deega anka lagu dagaa lamay ayaa waxaa sheega yaan in xaaladdu ay tahay mid deggan, hay eeshee dadka deegaan ka ay sheegeen in ay cabsi dareemayaan.
Afar musharax oo ka soo jeeda Soomaalida haysata dhalashada dalka Kanada ayaa u sharaxan doorashada dhawaan ka dhicidoonta dalka Kanada. Waana markii u gu horreeysay taariikhda dalk an Kanada oo ay iska soo sha rraxaan tiro in taa la eg oo ka soo wada jeeda Soomaalida ku nool dalka Kanada.
Musharixiintaan ayaa waxay ka kala sharr axan xisbiyada soo socda:
1) Axmed Xuseen oo hadda ah wasiirka So cdaalka iyo Jinsiyadaha ayaa Xisbiga Liberaal ka ugasharraxan xaafadda York South—Wes ton ee magaalada Toronto. Md.Axmed Xuseen ayaa doorashadii la qabtay 2015 wuxuu ku gu uleystay cod ka badan 20,000 ama 46%. Halk a xisbigii ku soo dhawaa oo ahaa NDPga uu helay cod gaaraya 13200 ama 30%
Deegaanka uu ka sharraxanyahay Axmed Xuseen ayaa lagu tilmaamaa in ay deggen yih iin Soomaalia badan.
2)Drs. Xabiiba Maxamuud ayaa sidoo kale u sharaxan Xisbiga Liberaalka ee Xaafadda Gri esback ee magaalada Edmonton ee Gobolka Alberta. Dr. Xabiiba ayaa ah bare wax dhigta Jaamacadda MacEwan ee magaalada Edmon ton. Doorashadii ugu dambeysay ee la qabtay 2015 waxaa ku guuleystay xisbiga Conserva tiveka oo helay cod dhan 19,157 ama 39.96%.
3) Cabdul Cabdi ayaa u sharaxan xisbiga Con servativeka ee xaafadda Nepean, galbeedka M/Ottawa ee gobolka Ontario. Waa markii 2aad ee Cabdul iska soo sharoxo isla deeg aanka uu hadda ka sharaxan yahay. Mushrax Cabdul ayaa wuxuu ka mid yahay Booliska magaalada Ottawa, wuxuuna hadda fasax ka qaatay shaqadiisa si ugu ololeeyo mushaxni madiisa. Doorashadii ugu dambeysay ee la qa btay 2015 ayaa waxaa deegaankaan ku guul eystay Xisbiga Liberaalka oo helay cod gaar aya 35,212. Magaalada Ottawa ayaa lagu tilm aamaa in ay tahay magaalada labaad oo ay deggen yihiin Soomaalida ugu badan dalka Kanada.
4) Naciima Faarax ayaa u sharaxan xisbiga NDPga ee xaafadda Etobicoke North ee Mtor onto. Naciima aya ah gabar u dooda xuquuqda aadamiga (Human Rights advocate). Waxayna ka howl-gashaa arrimaha la xiriira dhallinyada. Doorashadii la qabtay sannadkii 2015 ayaa wa xaa deegaankaan ku guuleystay xisbiga Libera alka oo helay cod gaaraya 26,281. Deegaanka Etobicoke North ayaa waxaa lagu tilmaamaa in deggen yihiin Soomaalida ugu badan ee ku nool magaalada Toronto Doorashada federaal ka ee dalka Kanada ayaa la filayaa in ay dhac do 21ka bishan Oktoobar.
HOGGAAMIYE MEYDKIISA LAGU DUL MURMAYAY 14 SANO OO LA AASAY
Meydka hoggaamiyihii shuuciga isbaddal doonka ahaa ee lagu magacaabi jiray Zhao Ziyang, oo xilka laga tuuray markii uu ka soo horjeestay howlgalkii lagu bartilmaame edsa day ardaydii mu daharaadeysay san adkii 1989-kii ayaa la gu aasay magaal ada Beijing. Har aadiga Mr Zhao, oo gee riyo oday sanadkii 2005-tii, ayaa lala aasay meydka xaaskiisii, waxaana loo sameeyay aas ay ka qeyb galeen dad faro kutiris ah.
Mr Zhao ayaa 1989-kii laga tuuray xilka xog-hayaha guud ee xisbiga shuuciga, wuxuuna ku jiray xabsi guri ilaa uu ka geeriyooday
Howlgalka uu ku gacan seyray oo ay amar kiisa bixiyeen saraakiisha Shiinaha ayaa xilliga as lagu dilay boqollaal qof, waxaana taariikhda dhacd ooyi nkaas laga saaray buugaagta iskuull ada Shiinaha.
Wadahadallo ku saabsan waxa laga yeela yo meydka nin ay mas'uuliyiinta dalkaas sidoo kale isku dayeen inay taariikhda waddanka ka saaraan ayaa qaatay sanado badan.
Xubnaha qoyskiisa ee aadka ugu dhow oo kaliya ayaa loo oggolaaday inay ka qeyb gala an aaska heerka hoose ah ee loo sameeyay, kaasoo ka dhacay qabuuro ku yaalla deegaan ka Chaoping ee duleedka magaalada Beijing.
"Shalaywaxaan aaseynaa waalidiinteen na, oo loo sameeyay aas kooban oo ku eg xub naha qoyska. Munaasabadda yar ee aaska ah waxaa lagu qabtay meel ay ku qanacsan yihiin qoyska", sidaas waxaa tiri gabadha uu dhalay Mr Zhao ee lagu magacaabo Wang Yannan, iy adoo la hadleysay BBC-da laanteeda Shiin aha.
Waxay sidoo kale raalligalin ka bixisay in aaska aan la sii shaacinin inta aan lagu dhaqa aqin ka hor, iyadoo sheegtay in qoysku aysan ogeyn inay oggolaanshaha ugu dambeeya ka helayaan mas'uuliyiinta, ilaa laga gaaray daqi iqaddii ugu dambeysay.
Zhao Ziyang waxaa dallacsiiyay hoggaamiy ihii sare ee Shiinaha, ee lagu magacaabi jiray Deng Xiaoping, kaasoo markaas raadinayay qof sare u qaada dhaqaalaha waddanka isla markaana u furfura caalamka intiisa kale.
Xilkiisa ayaa u muuqday mid sal adag ka dib markii laga dhigay xog-hayaha guud ee xisbiga Shuuciga, sanadkii 1987-kii.Laakiin mu daharaa dyada dimuqraaddi doonka ahaa ee ay sameynay een ardayda Shiinaha iyo qaar ka mid ah shacabka M/Beijing - iyo waliba qeybo kale oo ka mid ah Shiinaha - waxay labo sano ka dib sababeen kala qeybsanaan ka dhex ab uurantay hoggaanka xisbiga Shuuciga. Boqollaal kun oo ruux ayaa iyagoo dumuq raaddiyad dalbanaya sameynayay mudahara adyo nabdoon, waxayna intooda badan isugu tagayeen fagaaraha lagu magacaabo Tiana nmen. Mr.Zhao, oo ka dabacsanaa hoggaamiyey aasha kale ee xisbiga ayaa calool nugeyl u muujiyay dibadbaxyaasha.. Laakiin arrintaas waxay u horseedday in ciqaab la marsiiyo.
Sugitaankii muddada dheer oo lasoo afjaray
Falanqeyn ay sameysay wariyaha BBC-da laa nteeda Shiinaha, Vivian Wu.
Aaska Zhao Ziyang - oo mar ahaa ninka u gu darajada sarreeya dalka Shiinaha - wuxuu noqday arrin uu ka aloosnaa muran dabo dhe eraaday. Sida caadiga ah, aaska loo sameeyo hoggaamiyeyaasha Shiinaha waxay ahaayeen kuwo si qaddarin leh ugu dhaca wakhtiga loo gu talagalay, warbaahintuna ay tabiso.
Laakiin markii uu Mr Zhao geeriyooday sa nadkii 2005-tii, waxaa lagu dhawaaqay in aaski isa uu ka dhici doono qabuuro si wanaagsan loo habeeyay, oo loogu talagalay madaxda Shi inaha, saraakiisha xilalka sare soo qabtay iyo dadka caanka ah ee ay isku dhawaayeen mad axda.
Ka dib waxay mas'uuliyiinta waddanku diid een inay bixiyaan fasaxa meydkiisa loogu aasa yo qabuurahaas, qoyskiisuna waxay meydkii geysteen gurigooda. Wuxuu sidoo kale waay ay munaasabadihii caadiga ahaa ee loogu bar oordiiqi jiray hoggaamiyeyaasha Shiinaha ee geeriyooda, kuwaasoo intooda badanna loo sameeyo sanad guuro cayiman.
Mas'uuliyiinta dalku waxay ku qeexeen in uu ahaa "hoggaamiye laga xayuubiyay xilka" oo sanad guuro aan loo sameyn karin, waxay na adkeeyeen amniga goobta lagu hayay meydkiisa. Qoyska Mr Zhao ma aysan aqbalin arrintan, haddana iyagoo sannado badan dulq aad sameynayay, waxay oggolaadeen inay si wadajir ah u aasaan waalidiintooda.
Qabrigiisu wuxuu noqon doonaa meel xas uus ahaan loo siyaarto, maadaama uu naftiisa u huray helitaanka dimuqraaddiyadda, iyadoo xitaa aysan dowladdu oggoleyn in munaasaba do loo sameeyo xuska 4 June, oo ku saabsan markii ay billowdeen mudaharaadyadii dimuqr aaddiyadda.
JILAAGA CAANKA AH EE AMITABH BACHCH AN(CALI DHEERE) "OO ISBITAAL LOOLA CARARAY"
Qaar ka mid ah warbaahinta ugu wa aweyn Hindiya, sida wargeyska Hindus tan Times iyo telefi shinka NDTV, ayaa wax ka qoray warar ku saabsan xaalad da caafima ad ee Jilaaga caanka ah ee shirkadda fili mada Bollywood-ka Hindiya, Amitabh Bac hchan, oo ay Soomaalidu u taqaanno (Cali Dheere). Mr Bachchan ay aa Isbitaalka Nan avati ee magaala da Mumbai u tag ay baaritaankiisii caafimaad ee wareegtada ahaa, sida uu sheegay afhayeen u hadlay Isbitaalkaas.
Wakiilka Isbitaalka oo la hadlayay warg eyska Hindustan Times ayaa sidoo kale sheegay in sida la filayo dhawaan jilaaga laga saari doono halkaas.
"Mr Bachchan wuxuu u yimid baaritaa nkii caafimaad ee wareegtada ahaa, wuxu una alkan joogay ilaa maalintii Talaada da", ayuu yiri.Galinkii hore ee Shalaywaxaa soo baxayay warar sheegayay in Amitabh aysan xaaladdiisa caafimaad wa naagsaneyn oo isbitaalkana loo dhigay si loo daweeyo. Sida lagu xusay war uu shaaciyay war geyska Times of India, Atooraha waxaa isbitaalka loola cararay saacaddu markii ay ahayd 2am habeenimo, waabariga ka hor, ka dib markii xanuun dhinaca beerka ah uu kusoo booday.Waxaa lagu soo warramay in lagu daw eynayay qol khaas ah, oo la mid ah sida kan la geeyo dadka ay xaaladdoodu aad ka u liidato ee loo yaqaanno ICU.
Ma jirin cid loo oggolaa inay halkaas ga sho, marka laga reebo xubnaha ugu dhow qoyskiisa, sida lagu sheegay warbixintaas.
Dhinaca kale, Amitabh ayaa bartiisa Twitterka soo dhigayay qoraallo iyo sawi rro xiriir ah. Mid ka mid ah wuxuu kusoo daabacay sawirka xaaskiisa, isagoo ugu hambalyeynaya dabaaldagga munaasab ad sannadle ah oo dalkaas laga xuso.
Amitabh wuxuu muddo dheer la daalaa dhacayaa xanuun uu ka qabo beerka ka dib markii uu si lama filaan ah ugu dhacay cagaarshoyga noociisa loo yaqaanno He patitis B, xilli uu shil galay isagoo filim jilaya. Tan iyo xilligaas nabarrada ku abuur may beerkiisa wuxuu ku waayay 75% ka mid ah xubintiisa beerka.
Wargeyska Hindustan Times ayaa mar soo xigtay isagoo dhahaya: "Cagaarsho wga Hepatitis B ayaa iigu yimid si lama filaan ah. Ka dib markii aan shil galay an igoo jilitaan sameynaya, waxaa dhiig ii shubay 200 oo ruux, waxaana la igu shu bay ilaa 20 dhalo oo dhiig ah".
Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu yiri: "Mid ka mid ah dadkii dhiigga ii shubay ayaa qabay jeermiska cagaarshoygaas, dhiiggiisii ayaana la igu shubay. Si fiican ayuu beerkeyga u shaqeynayay ilaa san adkii 2000, markaas oo ahayd ku dhawa ad 18 sano ka dib markii uu shilka dhacay. Anigoo baaritaan caafimaad oo wareegto ah la igu sameynayo ayaa mar qura la igu wargaliyay in beerkeyga uu jirran yahay, waxaana iga go'day 75%".
Amitabh wuxuu 11-kii bishan October u dabaaldagay sanad guurada dhalasha diisa ee 77-aad, isagoo markaas la kulm ay taageerayaal badan oo u rajeeyay cimri dheer.Wuxuu hadda ku mashquulsan yahay jilista dhowr filim oo ay ka mid yihiin Jhund, Brahmastra iyo Sitabo Gulabo.Xigasho BBC
'FADEEXADDII DISHAY LABADII NIN EE I GUURSATAY'
Liz Hooper waligeed kuma aysan talo-galin inay jeclaato labo nin oo si isku mid ah u qaba xanuunka dhiig dareerka, mana aysan jecleyn inay labo jeer carmal noqoto. Laakiin inay jeclaato labadoodaba way dhacday. Haddana oo uusan midna ka nooleynna waxay sheegtay in qalbigeeda uu si isku mid ah u wada jecelyahay.
Waxay ahaayeen labo shakhsi oo aad u kala duwan, dabeecad ahaan iyo muuqaal ahaanba.
Jeremy wuxuu ahaa nin furfuran oo cod dheer, dadkana dhex gala oo jir dhisan leh. Laakiin Paul wuxuu ahaa lidkiisa.
Iyadu dareenka ay labadooda u heysay wuxuu ahaa mid cad oo khaas ah. Waxay sheegtay in Jeremy uu ahaa Jacaylkeedii ugu horreeyay, halka Paul uu ahaa lamaanihii nolosheeda.
Muddo dheer ayaa u dhaxeysay labada guur ee ay soo martay Liz, Liz waxaa wali ka go'i la' xanuunka jacaylka iyo xasuusta labadii nin ee soo guursatay, xilli ay hadda geerida Paul kasoo wareegtay lix bilood ku dhawaad toban sanona laga joogo markii uu geeriyooday Jeremy.
Marka laga soo tago jacaylka ay u qab een Lix, hal arrin oo labadoodaba mideys ay waxay ahayd fadeexaddii ay naftooda ku waayeen.
Waxaa lagu tilmaamay fadeexaddii u gu weyneyd ee soo martay waaxda qaran ee adeegga caafi,maadka UK, dadka qaar na waxay sheegeen inay fadeexaddaas sabab u noqotay dhimashada 2,883 qof oo British ah oo qabay xanuunka dhiig dareerka - inkastoo aan ilaa hadda cidna lagula xisaabtamin arrintaas.
Fadeexadda ayaa ku saabsan in dad badan oo qulqulka dhiiggooda uu xadkiisa soo dhaafayay, sida in qofka uu sanka dhiig ka dareero, ay u dhinteen dawooyin khaldan oo la siiyay.
Jeremy iyo Paul waxay ka mid yihiin dadka iyagoo laga daweynayo xanuunka as dawada khaldan la siiyay ee durbana u geeriyooday.
Liz waxay goob joog u ahayd labadee da sey oo si naxdin badan ugu geeriyoo naya natiijadaas.
Jacaylka ay labadoodaba u qabtay
Haddii uusan Liz ka dhiman lahayn Jer emy ma aysan la kulmi lahayn Paul. Taas ina dabcan waa macaan iyo kharaar wada jira, sida ay sheegtay.
"Sababtoo ah waxaan jeclaan lahaa in labadooduba aysan dhimanin, haddana sidaas oo ay tahay ma jeclaan lahayn in midkood uu ka maqnaado nolosheyda", ayey tidhi.
Jeremy Sanadkii 1978-kii, Liz oo 13 jir ah ayuu Iskuulkeeda kusoo biiray Jeremy Foyle, dhammaan ardaydana waxaa mar kaas loo sheegay in uu qabay xanuunka dhiig dareerka, sidaas awgeedna waxaa lagu amray inaysan cidna la dagaalin wiil kaas.
Way isbarteen, muddo ayey wada soc deen ka dibna way isguursadeen.
Jeremy wuxuu dhashay 17-kii bishii April ee sanadkii 1965-kii.
Waxyaabaha ay sida weyn ugu xasuus atay waxaa ka mid ah cajal uu siiyay hab eenkii ugu horreeyay ee ay isbarteen Liz, waxayna cajalkaas heysay muddo sann ado ah ka hor inta aysan isguursanin.
Nasiib wanaag, shan sano ka dib isbar ashadoodii, waxaa dhacay aqal galkooda, isla markii ay iyadu waxbarashadeeda isku ulka dhammeysatayba.
Muddo dheer ayuu xanuunka dhiig dareerka la noolaa, inta badanna wuu ka qarin jiray saaxiibadiisa kale iyo asxaabta ay isla shaqeeyaanba.
sanadihii 1970-meeyadii iyo 1980-meeya dii, waxaa soo baxay dawooyin loogu tala galay dadka xanuunka dhiig dareerka qa ba, waaxda qaran ee adeegga caafimaad kana waxay billowday inay kasoo dhoofsa to dalal dibadda ku yaalla oo uu ka mid ahaa Mareykaka.
Hase yeeshee goor dambe waxaa war baahinta laga sheegay in dawooyinkaas ay ku lifaaqnaayeen jeermisyo watay cu durro kale oo halis ah.
Ugu dambeyntiina Jeremy wuxuu u geeriyooday xanuunnada uu ka qaaday dawooyinkaas khaldanaa.
Paul:-Markii ay Liz xoogaa kasoo kabs atay murugadii badneyd ee kasoo wajah day geerida seygeedii hore, wiilkeeda ay aa ku dhiirrigaliyay inay mar kale isu fur furto dunida.
"Sidan ma fiicna, waa khalad hooyo", ayuu ku yidhi. Wuxuu u sameeyay ciwaan Facebook ah. Markaas waxay ahayd san adkii 2009-kii. Liz waxba kama aysan aqo onin waxa uu Facebook yahay.
Maalin maalmaha ka mid ah ayey com ment ka bixisay sawir uu soo dhigay qof saaxiib kula ah Facebook-ga. Kadib qof ay aa kusoo dul jawaabay qoraalkeedii. Qof kaas magaciisu wuxuu ahaa Paul Hooper, wuxuuna saaxiib Facebook kula ahaa qof ay Liz saaxiib ahaayeen.
Liz jawaab kale ayey ka bixisay qoraal kiisii, isaguna wuu soo laba jawaabay. Ka dib waxay isweydaarsadeen farriimo kha as ah, sidaas ayeyna isku barteen lamaan ihii nolosheeda.
Laakiin arrinti waxay noqotay lama fila an. Liz markii ay jeclaatay Paul ka dib ay ey ogaatay inuu qabo xanuunka dhiig dar eerka, uuna ku jiro isla xaaladdii uu ku jiray nikeedii hore.
"Ma aanan raadineynin inaan nin kale is guursanno, iskaba daa inaan rabay nin xa nuunkaas qabo", ayey tidhi.
Maalin ku beegneyd dabayaaqada is buuca ayey Paul iyo Liz isugu imaadeen guri uu lahaa qof saaxiib ah, halkaas aye yna markii ugu horreysay isugu arkeen si fool-ka-fool ah.Labadooduba way iska hel een, wayna is jeclaadeen.
Wax badan kama soo wareegin markii ay guur ku heshiiyeen, sidaas ayeyna nolosha ku wadaageen.
Ka hor inta uusan xiriirkooda aad usii weynaanin, Paul wuxuu xusay inuu qabay cudurka HIV iyo cagaarshowga nooca loo yaqaanno hepatitis C, labada cudurna wux uu ka qaaday dhiig khaldan oo lagu shu bay, isagoo laga daaweynayo xanuunka dhiig dareerka.
Laakiin sida qeybaha kore ee sheeka da ku xusanba, Paul wuxuu u dhintay da wada khaldan ee xanuunkiisa loo isticm aalo, taasna waxaa sabab u ahayd qeyb ka mid ah fadeexaddii dishay Jeremy
MASAR: NINKA CAANKA AH EE SABABAY IN DUULIYE DIYAARADEED LAGA MAMNUUCO SHAQADA
Duuliye diyaaradeed oo u dhashay dalka Masar ayaa laga mamnuucay inuu waligiis dambe diyaarad kaxeeyo ka dib markii uu jilaaga caanka ah ee lagu magacaabo Maxamed Ramadaan u fasaxay inuu la galo qeybta duuliyeyaasha, xilli ay ku jire en duullimaad ku wajahnaa waddanka Sacuudi Carabiya.
Jilaagan sidoo kalena fannaanka ah ayaa bar aha bulshada soo dhig ay muuqaal muujinaya isagoo gacmaha ku ha ya qalabka laga wado diyaaradda, halka qof kalena uu leeyahay, "Hadda isaga ayaa diyaaradda wada".
Duuliyihii diyaaraddaas ayaa lagala no qday shatiga, kaasoo aan waligiis dambe dib loo siin doonin, halka kaaliyihii duuliya ha ee diyaaraddaas la socdayna lagu ganaaxay mamnuucis hal sano ah.
Diyaaradda khaaska ahayd ee duullim aadkaas sameyneysay ayaan magaceeda wali la shaacinin.
Wasaaradda duulista hawada ee dalka Masar ayaa bayaan ay soo saartay ku ti dhi:"Kadib markii aan xaqiijinnay xadgud ub ka dhan ah shuruucda duulista hawada ee Masar, waxaan tallaabo aan shatiga ug ala noqonnay ka qaadnay [duuliyaha qey rul-mas'uulka ah ee howshiisa gabay], sida ay shaacisay warbaahinta Masraawi.Amniga dhinaca duulista ee Masar waa mid lama taabtaan ah, ayey hadalkeeda sii raacisay wasaaraddu.
Maxamed Ramadaan, oo in ka badan 7 malyan oo ruux ay ku taxan yihiin bartiisa Youtube-ka, ayaa muuqaalkaas soo gali yay 13-kii bishan October, wuxuuna sidoo kale ku sii shaaciyay barihiisa Twitter-ka iyo Instagram-ka.
Isagoo la hadlayay kaamirada muuqaal kaas lagu qaadayay ayuu yidhi: "Waxaan kaxeynayaa diyaarad, waana markii ugu horreysay ee ay arrin noocan oo kale ah dhacdo".
Muuqaalka ayaa ku dhammaanaya isa goo intuu qeybta diyaaradda laga kaxeeyo galay, ka dib ag fariistay duuliyaha, marka asna gacmaha ku qabtay isteerinka laga kaxeeyo diyaaradda.
Qof aan magaciisa la shaacinin oo ay san kaamirada wajigiisa qabanin, balse codkiisa la maqlayay ayaa markaas yidhi: "Magaca Alle ayaan ku dhaartaye, Max amed Ramadaan ayaa hadda ah qofka diyaaradda wada".
Sharciga duulista hawada ee dalka Ma sar ayaa mamnuucaya in qof rakaab ah uu qeybta duuliyeyaasha ee diyaaradda galo, xilli hawada lagu jiro ama matoorka diyaaradda uu daaran yahay.
Qaar ka mid ah dadkii muuqaalkan ku arkay baraha bulshada ayaa si caro leh u ga falceliyay, iyagoo xitaa dadka ku boorri yay inay xayiraad kusoo rogaan atoorah aas.
Ramadaan, oo kasoo muuqday in ka badan 10 filim oo Masaari ah, iyo musalsa llo telefishinnada laga soo daayo ayaa la sheegay inuu la safrayay kooxda fanka ee uu ka tirsan yahay, waxayna kusii jeedeen magaalada Riyaad ee caasimadda u ah waddanka Sacuudiga. Atoorahan 31 jirka ah ayaa sidoo kale caan ka dhex ah waaxda muusikada ee waddankaas, isagoo qaaday heeso si we yn loo jecleystay. In ka badan 158 malyan oo ruux ayaa mid ka mid ah heesihiisa ku daawaday Youtube-ka. Inkastoo uu taag eerayaal badan leeyahay, haddana Ram adaan ayaa horay ugu lug yeeshay dhacd ooyin muran badan dhaliyay.
Bishii August, waxaa jiray baaqyo ku saabsanaa in fannaankan laga mamnuuco bandhigyada ka dib markii lagu dhaliilay inuu hees kusoo qaaday shaati shabaq ah oo jirkiisa laga dhex arki karay.
Sanadkii 2016-kii, waxaa sidoo kale la gu cambaareeyay inuusan ka fikirin duruu faha taageerayaashiisa, oo intooda badan sabool ah, maadaama uu mar walba soo bandhigo sawirro iyo muuqaallo ku saabs an noloshiisa heerka sare ah iyo gawaari da qaaliga ah ee uu soo iibsado.